Tess E. McLoud, Odee na Ọmụma SUCCESS
Onye ndụmọdụ amụma, PRB
Tess E. McLoud bụ onye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara ndị PRB, Ahụike, Otu egwuregwu ụwa, ebe ọ na-arụ ọrụ na nkwado maka atụmatụ mmepe multisectoral nke na-ekwu maka njikọ dị n'etiti ọnụ ọgụgụ mmadụ, ahụike, na gburugburu ebe obibi. Ọrụ ya agbasala akụkụ gụnyere ahụike ọmụmụ na gburugburu ebe obibi, na-elekwasị anya na ọrụ na-eche obodo ihu na Africa na Asia. Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ rụrụ ọrụ na mmepe obodo dịka onye ọrụ afọ ofufo Peace Corps na Thailand, butere ụzọ na mgbanwe mgbanwe ihu igwe na UNESCO, ma jikwaa mmemme ahụike ịmụ nwa na Afrịka francophone na Ipas. Tess jide nzere bachelọ na anthropology na French sitere na Dartmouth, na Master's na French na-elekwasị anya na mmepe mba ụwa site na Middlebury.
N'ọnwa Septemba 2021, Ịga nke ọma na amụma, Nkwado, na nzikọrịta ozi emelitere maka ahụike ọha mmadụ na ịmụ nwa (Ọsọ ọsọ) oru ngo weputara nke mbu n'ime usoro mkparita uka obodo na-eme n'igwe okwu Njikọ nke ndi mmadu-Planet na-enyocha. ...
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti10592 Echiche
20 Ihe ndị dị mkpa 20 Akụrụngwa dị mkpa maka ọnụ ọgụgụ mmadụ, Ahụike, na gburugburu (PHE)
Kristen P. PattersonTess E. McLoudElizabeth Tully Nọvemba 18, 2020
Nchịkọta ọhụrụ a ga-enye ndị mmadụ, ahụike, na obodo gburugburu nwere mma, dị mfe ịchọta akụrụngwa iji kwalite mgbanwe ọmụma.
nkata_bubble0 Ikwu visibiliti7435 Echiche